Ihe ịtụnanya snow na nkwalite nke KarFest Omume | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliIhe ịtụnanya snow na ngosipụta nke KarFest emume
15 / 01 / 2020 41 Kocaeli, General, Mpaghara Marmara, Turkey, TELPHER
Ntughari snow na ngosiputa ihe omume karfest
KarFest, nke a ga-eme na nke mbụ n’afọ a na mmekorita nke Kocaeli Metropolitan Municipal na Kartepe Municipality, ga-ewere ọnọdụ na Sisli Valley na Satọdee, Jenụwarị 18th n’etiti 14.00-24.00. Ọtụtụ ihe omume, asọmpi na ihe ngosi a ga-eme n'usoro ihe omume a ma ama bụ onye na-egwu egwu pop na-ahụ maka egwu bụ Irem Derici ga-ewere ọkwa ahụ.
KarFest, nke ga-abụ ihe ngosi nke ihe omume na ihe ngosi na Kartepe, adresị maka njem nlegharị anya n'oge oyi, ka a ga-eme na Sisli Valley na Satọdee, Jenụwarị 18th n'etiti 14.00-24.00. Ngwurugwu DJ na-agaghị echefu echefu, ihe ngosi ọkụ laser, egwu dị egwu, egwuregwu, asọmpi, ndị na-ese ihe n’egwuregwu mpaghara, oriri mmemme sausaji, na-agwọ ga-eme ka obi ju gị obi na egwu ịgba egwu İrem Derici; na ọdịdị pụrụ iche; njem, obi ụtọ, nnwere onwe na obi ụtọ na-eche gị na KarFest.
Site na njem gaa ebe a na-adọba ụgbọala, tii na ofe, skid slid gaa asọmpi, ihe nkiri rue ọrụ achịcha sausaji, ihe niile ga-enwere n'efu na KarFest. Na mgbakwunye, enweghị oyi na ememme ahụ. A ga-eji nkụ na barel iri abụọ na-eme ihe omume ga-ewe iwe dị ọkụ n'oge ememme ahụ. Citizensmụ amaala si mpaghara ahụ sonyere na asọmpi na ihe omume dịka '' Boat Races '', '' Rope Pull Race '', 'Penguin Running' 'na' 'Lantern Regiment' ',' 'squirrel' ',' 'Snowman' ' mascots na '' Penguin '' ga-anabata ndị ọbịa dị nta n'oge ememme ahụ. Na mgbakwunye, mpaghara foto ebe ndị sonyere ga-agaghị echefu ncheta kachasị mma ha ga-echere ndị ọbịa ha na mpaghara ememme ahụ.
E mere nzukọ ngosipụta nke KarFest na Maide Restaurant. Balamir Gündoğdu, onye odeakwụkwọ ukwu nke obodo ukwu, Hasan Aydınlık, onye nnọchi anya onye isi ọhụụ nke obodo ukwu, Mustafa Kocaman, onye isi obodo Kartepe, Kamil Öçbe, Onye isi oche nke Kartepe Tourism Association, Irfan Yigit, onye isi Kartepe Natural Life Tourism, na ndị nnọchi anya ndị NGO.
ĞB IR, AH CA, INWE obodo KOCAELİ ”
Onye ode akwukwo odeakwụkwọ ukwu nke Kocaeli Balamir Gündoğdu weere ala ahụ na nzukọ ahụ; “A maara Kocaeli dị ka isi obodo nke ụlọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ. Agbanyeghị, Kocaeli; ya na odidi ya puru iche, oke osimiri na osimiri n’ime udu mmiri, ugwu dicha n’ulo mgbe udu mmiri, aburula ihe di nkpa n’agha. Dịka Kocaeli Obodo ukwu, anyị emeela ụzọ dị mkpa iji gbakwunye akara 'Season Tourism City Kocaeli' na aha obodo anyị niile anyị na-aga n’ihu. Ebe òtù anyị agbasawo ụbọchị 365 nke afọ, Kocaeli na-agbasi mbọ ike iji ghọọ ebe a na-eme egwuregwu nke East Marmara. ”
Balamir kwupụtara na ha ga-ahazi Ememe Ọkụ na nke mbụ n’afọ a; Arak Site na nhazi nke nkwado Kartepe, anyị na-ahazi Kartepe Winter Festival-KarFest site n'enyemaka nke ndị ọrụ aka na mpaghara. Ọ ga-abụ na ọnọdụ fun eme ihe na-egosi karfest onye ọ bụla ọzọ, nke bụ n'etiti ndị kasị mkpa address on January 18 Kartepe nke oyi njem Turkey ga-ẹkenịmde on Saturday. A ga-eme ememme a na Sisli Valley na Kartepe Mountain Road ma ga-aga n’ihu ruo awa iri na anọ na awa iri abụọ na anọ. Kartepe, nke bụ otu n'ime ihe ndị kasị J.Randall address of oyi njem Turkey, a festive Uludag, a nzọụkwụ nke ga-eguzo si Kartalkaya dị ka, "ka o kwuru.
“ANYEST GA-EBURU Ç
Mustafa Kocaman, onye isi obodo Kartepe onye kwuru na ekwesịrị ị chebe ememme ahụ; Eme njem nlegharị Kış n’obodo anyị ogologo oge. Ndị ahịa na ndị bi ebe ahụ chọrọ ka e mee ememme dị otú ahụ. Anyị bidoro mbọ anyị na-eme ka ndị anyị nwee ọ happyụ na ịgbakwunye uru ika na mpaghara anyị. Anyị na-ewere nzọ ụkwụ iji mee Kar kasị mma nke mpaghara Marmara na KarFest. Obodo Obodo mepere emepe anyị. Achọrọ m ikele onye isi ala anyị. Ekwesiri ịkwado oru a. Anyị ga-enwe ọtụtụ adịghị ike, mana ekwesiri ịnabata ndị a. Anyi choro ka ndi mmadu anyi na ndi oru nta akuko chebe ememe a.
EGO NA-EGO IME INI A NA-EKWU ND.
Na ngwụsị nke mmemme ahụ, protocol webatara KarFest na etiti obodo. Maka mgbasa a na-eme n'ihu Fridaylọ Alakụba New Friday Kartepe'den wụsara n'ime gwongworo nke obodo. Na mgbakwunye na snow kpụkọrọ akpụkọ, etinyere ụgbọ ala ndị abụọ na-apụ n'okporo ụzọ abụọ, igwe na-ada snow na nnukwu snow dị n'otu ebe ahụ.
Ihe omume a, nke ga-eme ka ọha na eze mara, ga-agụnye ihe ngosi DJ, ihe ngosi ọkụ laser, egwu ndụ, egwuregwu, asọmpi, ndị na-ese ihe n’egwuregwu, oriri oriri sọks, oriri iji mee gị obi ụtọ na egwu İrem Derici, aha a ma ama nke egwu ịgba egwu. Mgbe ebidochara ihe omume nke KarFest, emere ihe ịtụnanya na Izmit Town Square.
Agaghị enwe nsogbu n'ụgbọ njem
Efere usoro niile dị mkpa site na Ngalaba Transportgbọ njem Obodo, Kartepe Obodo, Ngalaba ndị uwe ojii na District Gendarmerie Command. Iji zere ọgba aghara ndị na-akpata, ndị otu nke Obodo ukwu na nke Kartepe; Njikọ ndị Maşukiye-Derbent na Suadiye-Arslanbey'den ga-eme ka okporo ụzọ niile ghe oghe. A ga-emechi Maşukiye maka okporo ụzọ dịka elekere 15.00. A ga-ebugharị ọrụ bọs na Maşukiye square dị na awa 11.00 site na ugbo ala nke onwe ma ọ bụ njem ọha.
FLB FLROG AKW ;KWỌ;
Omume nkwalite Eurasia Road na Edirne
Olympos Teleferik na-eleta snow anya
Mgbasa ozi ụgbọ okporo ígwè Saudi Arabia Anyị wee ghọọ onye na-akwado akwụkwọ mgbasa ozi nke 2013
18 Onye mmeri nke Pants-Free Verage Event Held
Anya ụgbọ okporo ígwè maka ndị ọrụ hazelnut
Yenikapı-Hacıosman metro akara bụ ihe ijuanya
Mee njem na-anya ndị njem YHT
Metrobus anya site na Minista Minista Erdogan
Ihe Nleba Ọhụụ New na Tram Silkworm